एक्लो श्रमिक सुरक्षा: गम्भीर हुनको लागि समय (A10002) | OMG समाधानहरू
एक कम्पनी जससँग कर्मचारीहरू छन् जसले गतिविधि र प्रदर्शन गर्दछ जुन नजिक र सिधा सुपरिवेक्षण बिना अर्को कामदारबाट टाढाबाट गरिन्छ। एक्लो कामदार भनेर चिनिन्छ। तिनीहरू प्राय: धेरै महत्त्वपूर्ण तर धेरै खतरनाक भूमिकाहरू पूरा गर्न आवश्यक हुन्छन्, उनीहरूले लिने भूमिका र जागिर धेरै ज्यान जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। श्रमिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा गम्भीर हुनु भनेको यी खतरनाक क्षेत्रहरूमा काम गर्न महत्वपूर्ण कर्मचारीहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एक्लो कामदारहरू प्राय: दैनिक परिमाणको विविध जोखिममा पर्दछन् र तिनीहरूलाई मद्दत गर्ने कोही पनि हुँदैन। यो जान्नु राम्रो हो कि कस्तो प्रकारको कर्मचारी सुरक्षा प्रणाली संगठन चलिरहेको छ, चाहे तिनीहरू म्यानुअल प्रणाली चलाइरहेका छन् वा प्रविधि आधारित प्रणाली। एक म्यानुअल प्रणालीमा सावधान रहनु र तपाईंको वातावरण अवलोकन गर्नु समावेश हुन सक्छ, जबकि घाइते हुँदा तपाईंले आफैंलाई प्राथमिक उपचारको उपचार लिन वा एम्बुलेन्स फोन गर्नुपर्दछ। सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने यो विधि एक पुरानो विधि हो जुन प्रविधिको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले अवधिहरूमा प्रयोग गरिएको थियो। संगठनको सुरक्षा प्रणाली कस्तो चलिरहेको छ भनेर जान्नु प्रायजसो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रत्येक रोजगारदाताले उनीहरूसँग म्यानुअल प्रणाली वा प्रविधि प्रणाली छ कि छैन जाँच्नु पर्छ। न त चलिरहेको प्रणालीको लागि, उनीहरूका कामदारहरू ठूलो जोखिममा हुन सक्छन् किनकि उनीहरूलाई कुनै पनि समयमा हानी हुन सक्दछ। यसले अन्तत: मृत्युमा पु lead्याउन सक्छ वा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा धक्का दिन काम गर्न सक्षम हुनुबाट। नियोक्ताहरू जसले विश्वास गर्छन् उनीहरूसँग सुरक्षा प्रणाली छैन उनीहरूले एकल श्रमिक जोखिमको साथ आउन र उनीहरूका कामदारहरूलाई अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्न निम्न विधिहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। यी विधिहरू हुन्:
सम्भावित जोखिम र जोखिम पहिचान गर्दै; तपाइँको एक्लो कामदारहरूलाई रक्षा गर्न पहिलो नियमहरू सबै जोखिम र समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने पहिचान गर्नु हो। तिनीहरू दुई वर्गमा विभाजित छन्:
वातावरणीय जोखिम: यी जोखिमहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै स्वास्थ्य समावेश हुन सक्छ जुन हृदय दुखाइ, स्ट्रोक र बम्पजस्ता रोगहरू निम्त्याउन सक्छ वा तत्काल स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्ने अन्य कुनै पनि रोगहरू हुन सक्छ। यी जोखिमहरूमा कुटिल आघात, झरना, यात्रा र केही अन्य खतराहरू पनि पर्न सक्छ जो कि मानिस डाउन अवस्थाको रूपमा देख्न सकिन्छ।
सामाजिक जोखिम: सामाजिक जोखिम कर्मचारीहरू द्वारा सामना गर्ने सबैभन्दा सामान्य जोखिम प्रकार हो। किनकि कर्मचारीहरूले दैनिक फरक फरक व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ डकैती, शारीरिक हमला, यौन दुर्व्यवहार वा मानसिक आक्रमणको घटना हुन सक्छ। काम गर्ने क्रममा भेट्नुहुने सबैलाई विश्वास गर्न वास्तवमा असम्भव छ।
एक्लो कामदारहरूको आकलन गर्ने; एक कम्पनी को सामना गर्न को लागी जोखिमहरु संग लड्न को लागी, एक सक्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्छ। यसले प्रश्नहरूको शृंखलाहरू राख्नु र तिनीहरूलाई समाधानहरू समावेश गर्न सक्दछ। प्रश्नहरू जस्तै:
के उनीहरूले कुनै म्यानुअल ह्यान्डलिंग समावेश गर्दछ?
के महिलाहरू जोखिममा छन् यदि तिनीहरू एक्लै काम गरिरहेका छन्?
के यस काममा नग्न आगोको ह्यान्डल समावेश छ?
के काम ऊंचाईबाट कार्यान्वयन हुनेछ?
के यो काममा जनावरहरूसँग पहुँच वा सम्पर्क समावेश छ?
यस प्रश्नहरूको उत्तर दिएर, कम्पनीहरूले जोखिमहरू समावेश गर्न सक्दछन र ठाउँमै उपायहरू राखेर तिनीहरूलाई जाँच्दछन्
एक्लो कामदार र पर्यवेक्षकहरूलाई प्रशिक्षण; पर्याप्त प्रशिक्षण हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि कामदारहरू समस्याहरू समाधान गर्न तयार हुन्छन् र कामहरू चाँडै पूरा गर्दछन्। यी प्रशिक्षणहरूमा समावेश हुन सक्छ: कामका खतराहरू बारे जानकारी, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, ड्राइभि driving प्रशिक्षण र मेशिनरीहरू कसरी राम्रोसँग प्रयोग गर्ने तालिम कर्मचारी।
एक एक्लो कार्य नीति लागू गर्दै; यसले दुबै कामदार र सम्पत्ति सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ। लोन श्रमिक नीतिमा मुद्दा हाल्नु पर्छ किनभने उनीहरूले सुरक्षित कार्य वातावरणमा योगदान पुर्‍याउँछन्। तिनीहरू जोखिम मूल्याation्कनका लागि फ्रेम वर्क पनि निर्माण गर्छन् जुन स्टाफले हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
एक्लो कामदारहरू र ब्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीका बीच सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्; यो महत्त्वपूर्ण छ कि समयको प्रत्येक बुँदा प्रबन्ध कर्मीहरू एक्लो कामदारहरूको स्थान र गतिविधिहरूको बारेमा सचेत हुन्छन्। यो सुनिश्चित गर्न को लागी हो कि तिनीहरु निगरानी गर्न सक्छन् र एक समस्या छ जब दृष्टिकोण। यस बिन्दुमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूसँग एक्लो काम गर्ने निगरानी प्रणाली छ।
एक्लो कामदारहरूलाई उत्तम उपकरणको प्रावधान; राम्रोसँग सुसज्जित हुनु भनेको एकल कामदारका लागि, उसले केवल आफ्नो कार्य राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नेछैन तर सुरक्षित महसुस पनि गर्दछ किनकि ऊ राम्ररी जान्छ उसले राम्रो उपकरणको साथ काम गरिरहेको छ भनेर राम्ररी जान्दछ।
एक एक्लो श्रमिक अनुगमन प्रणालीमा लगानी गर्नुहोस्; एक एक्लो श्रमिक प्रणाली एक कम्प्युटर प्रोग्राम वा सायद अनुप्रयोगहरूको संयोजन हो जसले व्यापार मोनिटर गर्न मद्दत गर्दछ र लोन श्रमिकहरूलाई तिनीहरूको स्थिति बारे सचेत रहन र मानिस तल झर्दै SOS सचेत गराउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरू एन्ड्रोइड, आईओएस र वेब प्लेटफर्महरू भरि दौडिन्छन्।
आज, टेक्नोलोजीले हाम्रो जीवनको ठूलो हिस्सालाई असर गरेको छ, व्यक्तिहरू अब पूर्ण स्वचालन अन्तर्गत कार्य प्रक्रिया छिटो गर्न उन्नत उपकरणहरूको प्रयोग गरेर अझ बढी कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्दछन्। एक्लो श्रमिक अनुगमन प्रणाली एक महान प्रविधि हो जसले कम्पनीहरूलाई धेरै सहायता गर्दछ। अब कम्पनीले केवल यस उपकरणको खरीद गर्न र लागू गर्न सक्दछ। यसका लाभहरू:
समय पालना गर्दै
द्रुत अन्तर्क्रिया र संचार
एक कम्पनीको रूपमा यो अत्यावश्यक छ तपाईंले श्रमिकहरूलाई ध्यान दिनुहोस् र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुभयो। एक्लो कामदारहरू धेरै जोखिममा छन् र होसियारीपूर्वक अनुगमन गरिनु पर्छ, iHelp तपाईको कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि तपाईलाई चाहिन्छ। केहि यी महत्त्वपूर्ण सुविधाहरूको साथ, iHelp ले कामदारहरूलाई सुरक्षित राख्दछ जबकि नियोक्ताहरूलाई उनीहरूको निगरानीमा मद्दत गर्दछ। मद्दत एक कुञ्जी श्रृंखला हो जुन म्यान डाउन सिस्टमको रूपमा दोब्बर हुन्छ, एकल उपकरण जो एक्लो कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष बनाइएको हो। यसमा भएका केही प्रमुख सुविधाहरू हुन्:
स्थान ट्र्याकिंग; यसले GPS को साथ सँधै कामदारहरूको स्थान ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँदछ
पतन पत्ता लगाउनुहोस्; केही सेन्सरहरूको साथ एक पटक गिरावट फेला पर्‍यो भने अलार्मलाई समर्थन टोलीमा पठाइन्छ
२ तरिका संचार; यो विकल्पको साथ कामदारसँग कुराकानी गर्न सम्भव छ
पानी प्रमाण गुणस्तर; पानीको मुनि भए पनि, उपकरण अझै राम्रोसँग काम गर्दछ
Sइनगल प्रेस SOS कल बटन; बटनको एकल ट्यापको साथ अलार्मलाई समर्थन टोलीमा पठाउन सकिन्छ
नि: शुल्क मोबाइल अनुप्रयोग; एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी उपलब्ध छ।
सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्रहरू जस्तै निर्माणहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू, स्वास्थ्य सेवा, प्रवर्तन वा यातायातमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूका लागि। IHelp उपकरण कामदारहरू जहिले पनि सुरक्षित छ र यो खतरामा छ जब रोजगारदाता सजग छन् र तुरुन्त मद्दत पठाउन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पूर्ण कर्मचारी सुरक्षा समाधान प्रस्ताव गर्दछ।
2916 कुल दृश्यहरू 22 हेराइ आज